Guddiga Madax-banaan ee Dastuurka Soomaaliya oo helay xarun uu ku shaqeeyo – Kalfadhi
Xafiis cusub, oo uu yeelanayo Guddiga Madaxa-banaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgalinta Dastuurka Soomaaliya, ayaa maanta Muqdisho xarigga looga jaray. Guddoomiya Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo Xafiiskaas xarigga ka jaray, ayaa sheegay in loo baahnaa xarun u gaar ah Gudigga Madaxa-banaan ee Dastuur. “Waxaan hubaa in aad maanta haysataan xarun aad ku shaqaysaan, oo qalabaysan” ayuu Guddoomiye Cabdi Xaashi ku yiri Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-banaan ee Dib-u-eegista Dastuurka, Maxamed Daahir Afrax, ayaa sheegay in ay aad ugu baahnayeen xarun u gaar ah, oo ay ku qabsadaan shaqadooda arrimaha dastuurka la xirirta, waxa uuna bogaadiyay Hay’adda Qaramadda Midowbay u qaabilsan Hormarinta Barnaamijyada ee UNDP, oo maal galisay dhismaha xaruntaan cusub ee laga sameeyey Muqdisho.
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil iyo Madax ka socotay UNDP, ayaa goob joog ka ahaa Munaasabadda Xarig Jarka ee xaruntaas. Guddoomiyaha Guddiga Lasocodka Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), oo lagu casuumay kulanka, ayaa si kooban u yiri “waxaa hadda kadib loo baahan yahay in la dardar galiyo shaqada Guddiga, maadaama uu haysto goob u gaar ah”.
Dhismaha maanta xarigga laga jaray, ee uu ku shaqayn doono Guddiga Madaxa-banaan ee Dib-u-eegista Dastuurka Soomaaliya, waxa uu ku dhex yaalaa Xarunta Aqalka Sare ee Muqdisho ku taala.